Politika momba ny tsiambaratelo - Pedia Quotes
Daty mahomby: 29 jona 2019
Ny adiresin'ny tranokalanay dia: https://www.quotespedia.org.
Quotespedia ("isika", "isika", na "our") dia miasa ny tranokala https://www.quotespedia.org (ny "Service").
Ity pejy ity dia mampahafantatra aminao ny politika momba ny fanangonana, fampiasana ary fampahafantarana ny angon-drakitra manokana rehefa mitsidika sy / na mampiasa ny tranokalanay sy / na serivisy ary ireo safidinao ifandraisanao izany.
Mampiasa ny angon-drakitray izahay mba hanomezana sy hanatsarana ny serivisy. Amin'ny fampiasana ny serivisy, manaiky ny fanangonana sy ny fampiasana fampahalalana mifanaraka amin'ity politika ity ianao. Raha tsy voafaritry ny fitsipi-pifehezan-tena manokana, ny teny ampiasaina ao amin'ny Politika momba ny tsiambaratelo dia misy dikany mitovy amin'ny antsika andavanandro sy ny fepetra apetraka, azo jerena ao amin'ny https://www.quotespedia.org
Fampahafantarana sy fampiasana
Manangona karazana fampahalalana maro samihafa izahay ho an'ny tanjona samihafa hanolorana sy hanatsarana ny serivisy aminao.
Ireo karazana tahirin-kevitra voaangona
Mandritra ny fampiasana ny serivisinay, dia mety hangataka aminao izahay mba hanome anay mombamomba anao manokana izay afaka ampiasaina hifandraisana na hamantatra anao ("Data manokana"). Ny fampahalalana azo jerena manokana dia mety misy, saingy tsy voafetra ihany amin'ny:
Anarana sy nomena voalohany
Address, State, Province, ZIP / Zip code, City
Azontsika atao ihany koa ny manangona fampahalalana momba ny fidirana sy ny fampiasana ny serivisy ("Data Usage"). Ity fampiasana data ity dia mety ahitana fampahalalana toy ny adiresy Internet Protocol amin'ny Internet (ohatra adiresy IP), karazana navigateur, navigateur version, ny pejin'ny fanompoana ataonareo izay tsidihanareo, ny ora sy ny datin'ny fitsidianareo, ny fotoana laniana amin'ireto pejy ireto, miavaka pitsipika momba ny fitaovana sy ny angona hafa.
Mampiasa cookies sy teknolojian'ny fanaraha-maso hafa izahay mba hijery ny asa atao ao amin'ny Service ary mitazona fampahalalana maromaro.
Cookies dia rakitra miaraka amin'ny tahiry kely izay mety ahitana mpanondro tsy fantatra anarana. Ny cookies dia alefa any amin'ny tranokalanao avy amin'ny tranonkala iray ary voatahiry ao amin'ny fitaovana misy anao. Ny teknolojia fitadiavana ampiasaina koa dia ny mena, ny labozia ary ny scripty mba hanangonana sy hanarahana ny vaovao ary hanatsarana sy handinihana ny fanompoana.
Azonao atao ny manoro ny tranonkalanao mba handà ny mofomamy rehetra na hanondroana rehefa misy mandefa cookie. Na izany aza, raha tsy manaiky cookies ianao dia mety tsy afaka hampiasa ampahany amin'ny fanompoana.
Ohatra amin'ny Cookies ampiasaintsika:
Session Cookies. Mampiasa Cookies ho an'ny Six izahay mba hikarakarana ny tolotrasa.
Cookies mahaliana. Ampiasainay ny Cookie Tianao izay hahatsiarovanao ny tianao sy ny filaharana isan-karazany.
Cookies momba ny filaminana. Mampiasa Cookies Security ho an'ny tanjona fiarovana izahay.
Fampiasana ny data
Quotespedia dia mampiasa ireo angon-tsary nangonina ho an'ny tanjona maro:
Hanolotra sy hitazona ny fanompoana
Mba hampahafantaranao ny fanovana nataonao tamin'ny fanompoana
Mba hahafahanao mandray anjara amin'ny endri-pifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto rehefa misafidy ny hanao izany ianao
Hanolotra fikarakarana sy fanohanana mpanjifa
Hanolotra fanadihadiana na fampahalalana sarobidy mba hahafahantsika manatsara ny fanompoana
Mba hanaraha-maso ny fampiasana ny serivisy
Mamantatra, misoroka ary mamaha olana ara-teknika
Cookies iray dia rakitra kely izay mangataka alalana apetraka amin'ny kapila mafy ataonao solosaina. Raha manaiky ianao, dia ampiana ny rakitra ary manampy ny famakafakana ny fifamoivoizana amin'ny Internet na ny cookie dia mamela anao hahafantatra rehefa mitsidika tranonkala iray manokana ianao. Mamela ny famoahana tranonkala hamaly anao amin'ny maha-olon-tokana anao ny cookies. Ny fampiharana amin'ny tranonkala dia ahafahana mampifanaraka ny asany amin'ny zavatra ilainao, tianao ary tsy tianao amin'ny alàlan'ny fanangonana sy fahatsiarovana ireo vaovao momba ny tianao. Mampiasa mofomamy amin'ny fifamoivoizana izahay ary hamantatra hoe iza no pejy ampiasaina. Izany dia manampy anay handinika ireo angon-drakitra momba ny fifamoivoizana amin'ny pejin'ny tranonkala ary manatsara ny tranokalantsika mba hampifanarahana izany amin'ny filan'ny mpanjifa. Izahay ihany no mampiasa izany fampahalalana izany ho an'ny tanjona famakafakana statistika ary avy eo nesorina ilay rafitra. Amin'ny ankapobeny, ny mofomamy dia manampy anay hanome tranonkala tsara kokoa ho anao, amin'ny alàlan'ny fanarahana anay hanara-maso izay pejy hitanao fa mahasoa sy tsy ilainao. Ny cookie iray dia tsy ahafahantsika miditra amin'ny solosainao na misy fampahalalana momba anao, afa-tsy ny angon-drakinao nofidinao hizara aminay. Afaka misafidy ny hanaiky na handà ny cookies ianao. Manaiky cookies ny ankamaroan'ny mpampizara tranonkala, fa mazàna manova ny toeranao navigateur ianao mba hampihena ny mofomamy raha tianao. Mety hanakana anao tsy haka tombony amin'ny tranokala izany.
Ankoatra izany, Quotespedia dia mampiasa mofomamy mba hampisehoana ireo dokambarotra aminao amin'ny tranokala isan-karazany amin'ny Internet.
Azonao atao ny misafidy ny cookies amin'ny Google amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny Google Fampahafantarana Ads.
Varotra amin'ny antoko fahatelo
Ireo mpivarotra antoko fahatelo, anisan'izany i Google, dia mampiasa mofomamy mba hividianana doka mifototra amin'ny fitsidihan'ny tranonkala mialoha anao.
Ny fampiasana an'i Google cookie mofomamy DoubleClick dia manome alalana azy sy ireo mpiara-miombona aminy hanomezana doka anao noho ny fitsidihanao ny Blog Quotespedia sy / na tranonkala hafa amin'ny Internet.
Azonao atao ny misafidy ny fampiasana ny cookies cookie DoubleClick ho an'ny dokam-barotra mahaliana amin'ny alàlan'ny fitsidihana Fampahafantarana Ads. (na amin'ny fitsidihana aboutads.info.)
Ny antoko fahatelo dia mety mampiasa mofomamy, karazan-tranonkala ary teknolojia mitovy amin'izany hanangonana na handraisana ny fampahalalana amin'ny tranokalanao sy any an-toeran-kafa amin'ny Internet ary hampiasa izany fampahalalana izany hanomezana tolotra fandrefesana sy doka mikendry.
Fampandehanana ny data
Ny fampahalalana misy anao, anisan'izany ny Datafin'ny Daty manokana, dia azo alefa amin'ny - ary mijanona ao - ordinatera ivelan'ny fanjakana, faritany, firenena, oritra hafa an'ny governemanta izay mety ho hafa noho ireo avy amin'ny faritra misy anao ny lalàna fiarovana.
Ny fankatoavanao an'ity Politika Fiarovana ity ary arahinao amin'ny fandefasana izany fampahalalana toy izany dia maneho ny fanekenao amin'io fifindrana io.
Ny Quotespedia.org dia handray ny dingana rehetra ilaina amin'ny fiantohana fa ny data anao dia raisina am-pahatokiana ary mifanaraka amin'ny Politikan'ny tsiambaratelo ary tsy misy famindrana ny Data Data anao manokana raha misy fikambanana na firenena iray raha tsy misy fanaraha-maso tsara amin'ny toerany ao anatin'izany ny filaminana ny angon-drakitrao sy ny mombamomba anao manokana.
Famaritana ny rakitra
Quotespedia.org dia mety hampibaribary ny Data Data anao amin'ny finoana matoky fa ilaina ny hetsika toy izao:
Manaraka ny adidy ara-dalàna
Miaro sy hiaro ny zon'olombelona na fananan'ny Quotespedia
Mba hisorohana na fanadihadiana ny fahadisoana azo atao amin'ny serivisy
Miaro ny fiarovana manokana ny mpampiasa ny Service na ny vahoaka
Mba hiarovana amin'ny tsy fananana zo ara-dalàna
Ny fiarovana ny angon-drakitrao dia zava-dehibe amintsika, kanefa tadidio fa tsy misy fomba fampitaovana amin'ny aterineto, na fomba fitehirizana elektronika ny 100% azo antoka. Na dia miezaka ny mampiasa fomba ara-dalàna azo ekena isika mba hiarovana ny mombamomba anao manokana, dia tsy afaka manome toky ny fiarovana marina.
Azontsika ampiasaina ny orinasan'ny orinasa sy ny olon-tsotra mba hanamora ny fanompoana ("Service Providers"), mba hanomezany ny fanompoana ho antsika, hanao asa fanompoana mifandraika amin'ny serivisy na hanampy antsika amin'ny famakafakana ny fomba ampiasantsika ny Service.
Ireo antoko fahatelo ireo dia manana fahafahana miditra amin'ny Daty manokana anao fotsiny mba hanatanterahana ireo andraikitra ireo ho anay ary voatery tsy mamoaka na mampiasa izany amin'ny tanjona hafa.
Azontsika atao ny mampiasa ny Service Providers fanaraha-maso hafa mba hanara-maso sy handinihana ny fampiasana ny Service.
Raha te hahalala misimisy kokoa momba ny fomba fiasan'ny Google ianao, tsidiho azafady ny tranonkala Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Rohy mankany amin'ireo tranonkala hafa
Ny fanompoana ataontsika dia mety ahitana rohy mankany amin'ireo tranonkala hafa izay tsy ampiasaintsika. Raha tsindrio amin'ny rohy ankolaka iray, dia hotondroina amin'ny tranonkalan'ny antoko fahatelo ianao. Manoro hevitra mafy anao izahay mba hamerina hijery ny Politika tsy miankina amin'ny tranonkala rehetra tsidihinao.
Tsy manam-pahefana izahay ary tsy mandray andraikitra amin'ny politika na votoatin-kevitra momba ny fiainana manokana na fomba amam-panao na tranokala hafa.
Fiovana amin'ity politika ity
Azonao ampifandraisina amin'ny fotoana sasany ny politikan'ny Privacy. Hanamarina anao ny fanovana rehetra ianao amin'ny famoahana ny politika vaovao momba ny fiainana manokana eto amin'ity pejy ity.
Hampahafantatra anao amin'ny alàlan'ny mailaka sy / na filazana mibaribary eo amin'ny tolotrasa izahay, alohan'ny fiovàna dia hahomby ary hampivoatra ny "daty mahomby" eo an-tampon'ity politika ity.
Nolavina ianao hamerina mialoha ity Politika momba ny Daty ity ho an'ny fanovana rehetra. Ny fiovana amin'ity politika ity dia mahomby rehefa mivoaka ao amin'ity pejy ity.
Raha manana fanontaniana momba ity politika ity ianao dia manontania:
Amin'ny alàlan'ny mailaka: [mailaka voaaro]